Zoma 2 Novambra 2012 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Na mankasitraka azy ireo ianao na tsia, Google dia manana ny kianja filalaovana izay tsy maintsy iasan'ny mpivarotra. Na dokam-barotra misy karama miaraka amin'i Google na fametrahana organika ao anaty motera fikarohana dia mety hamaivaninao ny fahazoana an'i Google. Ity infographic avy amin'ny Wordstream ity dia mametraka ny fomba fijery rehetra.
From Wordstream's Google Facts Infographic: Ny fikarohana natao taminay momba ny infographic dia nahitana kaonty AdWords mihoatra ny 2,600 izay nitantana ny AdWords Grader tamin'ny Q3 2012. Ny kaonty mitambatra dia 250 tapitrisa tapitrisa dolara isan-taona no laniny. Manana kaonty amin'ny fandaniam-bola isan-karazany izahay; tena kely dia kely ny kaonty sasany, nandany 100 $ isam-bolana tao amin'ny AdWords. Ny sasany lehibe kokoa, miaraka amin'ny sasany mandany hatramin'ny tapitrisa tapitrisa ao amin'ny AdWords. Ny fandinihana dia nijery ireo kaonty manerana ny indostria rehetra, ary avy any amin'ny firenena rehetra iasan'ny Google orinasa.
Ny angona ho an'ity lahatsoratra bilaogy ity dia avy amin'ny fandalinana nataon'i Wordstream farany teo Statistikan'ny tranonkala Google, izay heverinay ho iray amin'ireo fandalinana feno indrindra momba ny fiasa anaty Google Ads izay natao hatrizay.
Tags: doka googlegoogle ppcGoogle SEOGoogle +fikarohana biolojikamandoa isaky ny kitihofikarohana OptimizationSEO
Dingana 5 hampitomboana ny fifamoivoizana ary hanova ny fitarihana ho mpanjifa
3 Nov 2012 amin'ny 1:32 maraina
Thnks ho an'ny infografika fampahalalana. Tsy antenaiko fa ny tranokala fiantsenana / ecommerce no voalohany. Ny antenaiko dia ny ecommerce no voalohany tafiditra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany.